मिस ग्रान्ड नेपाल हुँदै
२०७२ पौष २१ मंगलबार, काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न किसिमका सुन्दरी प्रतियोगिताहरु हुने गरेका छन् । यसै क्रममा यस वर्षदेखि मिस ग्रान्ड नेपाल प्रतियोगिता समेत आयोजना गर्न लागिएको छ । महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले मेरोलुक्स नामक संस्थाले मिस ग्रान्ड नेपाल प्रतियोगिता गर्न लागेको हो । संस्थाले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी १८ वर्षदेखि २६ वर्षसम्मका युवतीले प्रतियोगितामा भाग लिन सक्ने जनाएको छ । मिस ग्रान्ड विजेताले थाइल्यान्डमा हुने इन्टरनेसनल ... बाँकी अंश»
लालजोडीको गीत गाउँदै रेखा थापाले भनिन् ‘माँ–कसम’
२०७२ पौष २१ मंगलबार, काठमाडौं । चर्चित नायिका रेखा थापाको पहिचान केबल नायिकामा मात्र सीमित छैन । फिल्म निर्मात्री हुँदै निर्देशक समेत बनिसकेकी उनी आफैले बनाएको फिल्म ‘रामप्यारी’को संगीतकार पनि हुन् । संगीतकार बनेपछि अब उनको नाम गायनसँग पनि जोडिएको छ । हुन त उनले यसअघि नै फिल्म ‘वर्षात’मा कोरियोग्राफर तथा गायक शंकर बिसीसँग पनि गीत गाएकी थिईन् । यिनै रेखा मंगलबार भने पुतलीसडकस्थित लक्ष्मण शेषको स्टुडियोमा भेटिईन् । पत्रकार लक्ष्मण सुवेदीले निर्देशन गर्न ल ... बाँकी अंश»
सकुन्तला बने राजेश हमाल
२०७२ पौष २१ मंगलबार, काठमाडौं । केही समय अघि फिल्म ‘सकुन्तला’को फिल्म घोषणा कार्यक्रममा अभिनेता राजेश हमालले फिल्मको कथा सस्पेन्स रहेको र फिल्ममा सकुन्तला जो पनि हुनसक्ने बताएका थिए । उनले जो पनि हुनसक्ने भने पनि अहिले आएर फिल्मको शीर्ष भूमिकामा उनी आफै रहेको खुलेको छ । हमालको महिला रुप सार्वजनिक भएपछि उनी नै प्रमुख पात्र रहेको खुल्न आएको हो । हाल धमाधम छायांकन भईरहेको फिल्मको सुटिङको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि हमाल नै महिलाको भूमिकामा रहेको खुल्न आएको हो । फिल्म ... बाँकी अंश»
क्लासिकको नयाँ गीतमा नम्रताको उत्कृष्ठ काम(भिडियो)
२०७२ पौष २१ मंगलबार, काठमाडौं । माघ २९ गतेबाट अल नेपाल प्रदर्शन हुने फिल्म ‘क्लासिक’को ‘प्रकृतिको सुन्दर’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ताराप्रकाश लिम्बुको संगीतमा डा. कृष्णहरि बराल र मेलिना राईको स्वर रहेको गीतमा अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठलाई उत्कृष्ठ किसिमले प्रस्तुत गरिएको छ । दृष्टिबिहिनको भूमिकामा देखिएकी नम्रताले गीतमा लोभलाग्दो तरिकाले लिप्सिङ गरेकी छिन् । यसअघि सार्वजनिक भएको ‘सुनौला हरदिन’ले दर्शकको मन जितिसकेको छ । फिल्ममा आर् ... बाँकी अंश»
प्रेम गीतको स्याड गीत सार्वजनिक(भिडियो)
२०७२ पौष २१ मंगलबार, काठमाडौँ । प्रेम दिवसको अवसरमा प्रर्दशनमा आउने तयारीमा रहेको फिल्म ‘प्रेम गीत’को स्याड गीत सार्वजनिक भएको छ । फिल्मको टाइटल गीतले देशभर चर्चा पाइरहेको बेला फिल्मको स्याड गीत ‘म त अलपत्रै पर्छु’ सार्वजनिक गरिएको हो । स्वरुपराज आचार्य र अञ्जु पन्तको स्वरमा रहेको गीतका शब्द डा. कृष्णहरि बरालले लेखेका हुन् । अर्जुन पोख्रेलको संगीत रहेको गीतमा पुजा शर्मा र प्रदिप खड्का देखिएका छन् । गीतमा बिछोड पछिको सम्झना देखाउन खोजिएको छ । मायालाई आ ... बाँकी अंश»
अम्बर गुरुङलाई सरकारले दियो भत्ता
२०७२ पौष २१ मंगलबार, काठमाडौं । सरकारले नेपाली राष्ट्रिय गानका सङ्गीतकार तथा वरिष्ठ सङ्गीतकार एवं नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति अम्बर गुरुङलाई भत्ता स्वरुप ३० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको छ । प्रतिष्ठान मार्फत नियमित भत्ता उपलब्ध गराउने नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को गत कार्तिक २३ गतेको निर्णयानुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा प्रतिष्ठानका संरक्षक आनन्द प्रसाद पोखरेलले सङ्गीतकार गुरुङको बुढानिलकण्ठस्थित निवासमा उक्त रकम ... बाँकी अंश»
भूकम्पपीडितलाई धुर्मुस सुन्तलीले दिए २० लाखको ब्ल्याङ्केट
२०७२ पौष २१ मंगलबार, काठमाडौं । चर्चित हाँस्य कलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ले सिन्धुपाल्चोक बराम्ची गाविसका भूकम्पपीडितलाई ब्ल्याङ्केट दिएका छन् । अत्याधिक चिसोका कारण भूकम्प पीडितको कठ्याङ्ग्रीएर मृत्यु हुन थालेपछि उनीहरुले बराम्ची गाविसका ८ सय १६ परिवारलाई ब्ल्याङ्केट वितरण गरेका हुन् । ... बाँकी अंश»
पर्यटन मन्त्रीले भने -दोलखामा चलचित्र नगरी बन्नेमा ढुक्क हुनुस्
२०७२ पौष २० सोमबार, काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले दोलखाको लाँकुरीडाँडा गाविसको डाङ्डुगेमै चलचित्र नगरी बन्ने ढुक्क हुन सबैलाइ आग्रह गरेका छ । चलचित्र नगरी निर्माण सहयोग र दोलखाली पत्रकार समाजले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले चलचित्र नगरीका निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधारसमेत तय भइसकेको हुनाले दोलखामै चलचित्र नगरी बन्ने विश्वास दिलाउनुभयो । मन्त्री पोखरेलका अनुसार दुई लेनको करिब सात किमी सडक, ब ... बाँकी अंश»
गौरीको गीतमा महदेखि प्रचण्ड पुत्र मन्त्रमुग्ध
२०७२ पौष १९ आइतबार, काठमाडौं । गौरी मल्ललाई सबैले कुशल अभिनेत्रीका रुपमा फिल्म क्षेत्रमा चिन्छन् । तर उनी अभिनयबाहेक कुशल गायिका पनि हुन भन्ने कमैलाई थाहा होला । यिनै गौरी नयाँवर्षको अवसरमा ललितपुरको बखुण्डोलस्थित एक रेष्टुरेन्टमा गुञ्जिँदा उनको स्वरमा वरिष्ठ फिल्मकर्मी नीर शाहदेखि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का छोरा प्रकाशसम्म मन्त्रमुग्ध बने । नेपाली र हिन्दी गरी आधा दर्जन गीत गाएकी गौरीका गीत सुनेर सबैले उनलाई गायनतिर लाग्न सुझाव ... बाँकी अंश»
सोनुलाई ज्याकीले दिए ज्याकेट उपहार
२०७२ पौष १९ आइतबार, मुम्बई । बलिउड अभिनेता सोनु सुदलाई सम्झनलायक क्षणले स्वागत गरेका छन् । उनले नयाँ वर्षकै मौका पारेर ‘कुंग फु’ स्टारका रुपमा परिचित विश्वचर्चित अभिनेता ज्याकी च्याङबाट उपहार स्वरुप ज्याकेट पाएपछि उनी खुशीले पुलकित भएका छन् । सोनुले भारत चीनको फिल्म ‘कुंग फू योगा’का लागि ज्याकीसँग सुटिङ शुरु गरिसकेका छन् । सोनुले सामाजिक सञ्जालमा ज्याकीलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् । बलिउड हिट फिल्म ‘दबंग’ अभिनेता सोनुले ज्याकीसँग खिचेको तस्वीर पनि पोष् ... बाँकी अंश»
पोखरामा गर्जिए राजेश हमाल
२०७२ पौष १९ आइतबार, पोखरा । आगामी पौष २४ गतेबाट अल नेपाल रिलिज हुन लागेको फिल्म ‘बागमती’को ट्रेलरमा महानायक राजेश हमालको एउटा चर्चित डायलग छ । फिल्मका खलपात्रसँग भिड्दै उनले ‘‘नेपाल पहिलेको नेपाल रहेन तर राजेश उही राजेश हो’ भन्दै फाइट खेलेका छन् । फिल्म नगरी पोखरामा आइतबार फिल्म युनिटले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा हमाल गर्जदै पत्रकारका अगाडि त्यही डाइलग दोहो¥याए । उनले फिल्म राम्रो बनेको र दर्शकले मन पराउनेमा पनि आफु आशावादी रहेको बताए । ‘निर्देशक ... बाँकी अंश»
बालबालिकासँग नाँच्दै स्वेताले मनाईन् नयाँवर्ष
२०७२ पौष १९ आइतबार, काठमाडौं । अभिनेत्री स्वेता खड्काले अंग्रेजी नयाँ वर्ष रक्षा नेपालका बालबालिकामाझ मनाएकी छन । रक्षा नेपालको कार्यालयमा आयोजना गरिएको विशेष कार्यक्रममा उनले त्यहाँ रहेका बालबालिकामाझ दिल खोलेर नाँच्दै नयाँ वर्ष मनाईन् । २०१४ को अगस्ट महिनामा बिबाह भएको २५ दिनमै आफ्नो श्रीमान नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई गुमाएकी उनले भनिन्- २०१४ बेहोसिमै बित्यो भने २०१५ बिछिप्तता मै बित्यो। अब २०१६ मा समाजको लागि केहि गर्न चाहान्छु र श्रीकृष्णले देखेको अधुरा सप ... बाँकी अंश»
बलिउडमा बढ्न थाले सेक्स कमेडी फिल्म
२०७२ पौष १९ आइतबार, मुम्बई । बलिउडमा सेक्स कमेडी फिल्मले निकै तेज गतिले बाटो लिईरहेको छ । कम बजेटका यी फिल्मको कमाई पनि राम्रै गरिरहेको छ । त्यसकारण पनि निर्माताहरु यस्ता फिल्म बनाउन आकर्षित भईरहेका छन् । सन् २०१६ मा सेक्स कमेडीमा आधारित रहेर बनेका धेरै फिल्म रिलिज हुँदैछ । ‘मस्तीजादे’, ‘क्या कुल है हम ३’ र ‘ग्रेट ग्रैड मस्ती’ नयाँ वर्षमै रिलिज हुँदैछन् । ‘क्या कुल है हम’ र ‘मस्तीजादे’ यसै महिनामा रिलिज हुँदैछन् । यी फिल्मको ट्रेलरले दर्शकबीच उत्सु ... बाँकी अंश»
फिल्मका भिलेन अनुरागले दिए बालबालिकालाई न्यानो कपडा
२०७२ पौष १९ आइतबार, काठमाडौं । प्राय फिल्ममा नकारात्मक अर्थात भिलेनको छवि बनाएका कलाकार अनुराग मानसिंह कुँवरले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकाहरुलाई खाद्यन्न तथा लत्ताकपडा वितरण गरेका छन् । गत शुक्रबार परेको जन्मदिनमा उनले बालाजुमा रहेको हिमालय वृद्धाआश्रममा एक महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न, ग्यास र दाउरा प्रदान गरे भने पेप्सीकोलामा रहेको फ्युचर विक नेपाल बाल आश्रमका १८ बालबालिकाहरुलाई जाडोको न्यानो कपडा दिए । उनले बालबालिकाहरुसँग जन्म ... बाँकी अंश»
बेलायतमा खुल्यो करिश्माको मुटु
२०७२ पौष १९ आइतबार, काठमाडौं । कवयित्री तथा गीतकार करिश्मा घमको गीति एल्बम ‘मुटु’ को युके आसफोर्डस्थित केनिगंटन क्म्युनिटी हलमा विमोचन गरिएको छ ।मगर संघ केन्टका अध्यक्ष उत्तर मगरको अध्यक्षतामा आयोजित समारोहमा प्रमुख अतिथि समाजसेवी धन कुँवर, किरात राई यायोक्खा आसफोर्डका अध्यक्ष ध्यानबहादुर राई , किरात याक्थुङ चुमलुङका अध्यक्ष काजिमान याक्सो, किरात राई यायोक्खा बेलायतका सचिव चन्द्रवती राई, राप्ती समाज युकेका अध्यक्ष हिक्मतसिं रोका, राप्ती समाज युकेका सल्लाह ... बाँकी अंश»
जासूस रणवीर–क्याट्रिनाको यस्तो लुक्स
२०७२ पौष १९ आइतबार, मुम्बई । पाँच वर्ष पछि फिल्म ‘जग्गा जासुस’मा सँगै देखिन लागेका बलिउ जोडी रणवीर कपुर र क्याट्रिना कैफको पहिलो लुक्स सार्वजनिक भएको छ । यो जोडीले सन् २०१० मा फिल्म ‘राजनीति’मा देखिएपछि कुनै पनि अन्य फिल्ममा स्क्रिन शेयर गरेका थिएनन् । रणवीरले इन्स्टाग्रामको फ्यान पेजमा फिल्मको पहिलो मुहार राखेका हुन् । फोटोमा दुवैजना टिनेजर रुपमा देखिएका छन् । दुवैले चस्मा लगाएका छन् र निकै हैरानीका साथ केही बस्तुलाई हेरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार फिल ... बाँकी अंश»
सलमानले मागे सय करोड
२०७२ पौष १८ शनिबार, मुम्बई । पछिल्लो फिल्म ‘प्रेम रतन धन पायो’ र ‘बजरंगी भाईजान’को सफलता पछि बलिउड अभिनेता सलमान खानको सान निकै बढेको छ । सम्भवत यी दुई फिल्मको सफलताका कारण यी अभिनेताले आफ्नो फिल्मी रेट पनि बढाएका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनले फिल्म ‘सुल्तान’मा काम गर्नका लागि निर्मातासँगै सय करोड रुपैंयाँ पारिश्रमिक मागेका छन् । यो फिल्ममा उनी रेसलरको भूमिकामा देखिँदैछन्, जसका लागि उनले शरीरको तौल पनि निकै बढाएका छन् । यशराज फिल्मस्को व्यानरम ... बाँकी अंश»
अनु नआउँदा सबिनको अंगालोमा सारिका
२०७२ पौष १८ शनिबार, काठमाडौं । फिल्मको सुटिङमा व्यस्त हुँदा या अन्य केही कार्यक्रमले फिल्मको प्रमोसन कार्यक्रममा उपस्थित नहुँदा कलाकारलाई राम्रै घाटा लाग्छ । घाटा यस अर्थमा कि फोटोपत्रकारको क्यामराको फ्रेममा उनीहरु अट्द सक्दैनन् । राजधानीमा शनिवार आयोजित फिल्म ‘लक्ष्य’को पत्रकार सम्मेलनमा यस्तै दृश्य देखियो । फिल्मकी प्रमुख नायिका अनु शाह भए पनि उनी अनुपस्थित भएपछि त्यसको फाइदा अर्की नायिका सारिका केसीले लिईन् । पछिल्लो समयमा एक पछि अर्को फिल्ममा व्यस् ... बाँकी अंश»
पहिचान फेर्दै प्रियंका कार्की, गाईन गीत(भिडियो)
२०७२ पौष १८ शनिबार, काठमाडौं । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको नाम लिँदा उनलाई धेरैले नायिका भनेर नै चिन्छन् । यो कुरा सहि पनि हो । तर उनको प्रतिभा केबल फिल्मी अभिनय र म्युजिक भिडियोमा मात्र छैन । उनी एक कुशल कोरियोग्राफर(नृत्य निर्देशक) पनि हुन् । उनले फिल्म ‘पुन्टे परेड’, ‘आवरण’, ‘मिसन पैसा २’, ‘मेरो बेष्ट फ्रेण्ड’लगायतका फिल्ममा कोरियोग्राफी गरिसकेकी उनले फिल्म ‘आवरण’को एक गीत पनि गाएकी थिईन् । सानै देखि गायन र नृत्यसंगै अभिनयमा रुचि रहने प्रियंकाले ... बाँकी अंश»
भेडेटारमा आइडीवालीको खोजी
२०७२ पौष १६ बिहिबार, काठमाडौं । गायक भुवन सुप्तिहाङ राई हङकङको आइडीवाली खोज्दै भेडेटार पुगेका छन् । पछिल्लो समय ‘मायाको फूल’ एल्बममार्फत चर्चामा आएका भुवन बुधबार धरानदेखि केही किमिमाथि भेडेटारमा ‘आईडी छ कि छैन बहिनी सारै दुःख पाइयो’ भन्दै गरेको भेटिए । उमेर धेरै खाएकाले गोरखा भर्ती पनि जान नपाएको उनी गुनासो गर्दै ‘आइडीवाली’ सोध्दैथिए । भुवनले आइडीवालीको खोजी गरिरहेको दृश्यलाई छायांकार युवराज राईले आफ्नो क्यामेरामा कैद गरिरहेका थिए । प्रशंग म्युजिक भ ... बाँकी अंश»